ဧရာညီနောင်: Windows Phone 8 နှင့် 12 megapixel ကင်မရာ ပါဝင်လာမည့် ဆိုနီ အနာဂါတ် ဖုန်း
Windows Phone 8 နှင့် 12 megapixel ကင်မရာ ပါဝင်လာမည့် ဆိုနီ အနာဂါတ် ဖုန်း
ဒီဇိုင်နာ Victor Cao သည် Sony Ericsson Xperia Leon ၏ ဒီဇိုင်းကို ဖန်တီးခဲ့ရာ dual core 2GHz processor ကိုအသုံးပြုထားပြီး Windows Phone 8 Operating System ပါဝင်မည့် Sony Ericsson ၏ သဘောကျစရာ အနာဂါတ် smart phone ကို မြင်တွေ့ရသည်။
Sony Ericsson Xperia Leon တွင် ပုံရိပ်ဖော်နိုင်စွမ်း 1080p ပါရှိသော ၄.၄ လက်မ အရွယ် OLED display မျက်နှာပြင် ၊ 12 megapixel ပါဝင်ပြီး Full HD ဗီဒီယို ရိုက်ကူးနိုင်သော အနောက်ဘက် ကင်မရာ နှင့် 3.2 megapixel ပါဝင်သော ရှေ့ပိုင်း ကင်မရာ အပြင် Wireless HDMI နှင့် 1800 mAh battery တို့ ပါဝင်သောကြောင့် ဖော်ပြ၍ မကုန်နိုင်လောက်သော အတွေ့အကြုံများ ရရှိနိုင်မည်ဟု ဆိုသည်။
1. 2Ghz Dual Core Processor
2. 4.4″ Bravia 1080p OLED
3. 12 MP Auto focus camera
4. 3.2 MP secondary camera
5. Hand writing recognition
6. Super Slim 7.5 mm
7. Gorilla Glass surface
8. Transolid UI
12. WiFi a/b/g/n
13. 1080p 60fps video
14. Multi LED flash
15. Battery 1800 mAh
16. Windows Phone 8
မှတ်ချက်။ ။ မြို့တော်ပုသိမ် မှ တဆင့် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်........။
Posted by ဧရာညီနောင် at 11:03 AM